Ụgbọ elu na -achọ ịba ọgaranya na kredit ụgbọ elu gị na -agwụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu na -achọ ịba ọgaranya na kredit ụgbọ elu gị na -agwụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ọ bụrụ na ị kagburu ma ọ bụ gbanwee ụgbọ elu ọ bụla n'ime afọ abụọ gara aga, jide n'aka na ị ga -azụta ọnụ ahịa tiketi gị ejibeghi tupu oge agafee.
Ụgbọ elu na -anọdụ na ijeri $ 10 nke ọnụ ahịa tiketi na -ejighị ma ugbu a oge na -agwụnahụ ha.
Mgbe COVID-19 kwụsịrị atụmatụ njem onye ọ bụla. ndị ụgbọ elu gbasapụrụ iwu kagbuo ha na idegharị akwụkwọ.
Ọtụtụ ndị njem gbanwere ma ọ bụ kagbuo ụgbọ elu nwere kredit njem nke ndị ụgbọ elu nwere ike na -agwụ ngwa ngwa.
Ọ bụ ezie na ndị na -anya ụgbọ elu siri ike na 2020, ọtụtụ na -achọ inweta nnukwu ego site na kredit ụgbọ elu na -agwụ. Dị ka akụkọ ndị ahụ si kwuo, ndị na -ebu ụgbọ elu na -anọdụ na ijeri $ 10 nke uru tiketi a na -ejighị ma ugbu a oge na -agwụ.
Mgbe COVID-19 kwụsịrị atụmatụ njem onye ọ bụla, ndị ụgbọ elu gbasapụrụ usoro kagbuo ha na idegharị akwụkwọ. Ọtụtụ ndị gbanwere ma ọ bụ ụgbọ elu akagbuo nwere kredit njem sitere na ndị ụgbọ elu nwere ike na -agwụ ngwa ngwa. Nke a bụ otu esi enyocha ma jiri kredit njem gị tupu oge agafee.
Chọta ozi ịntanetị ochie gị
Ọ bụrụ na ị kagburu ụgbọ elu, ikekwe zitere gị ozi nkwenye yana nkọwa gbasara kredit njem gị. Ụzọ dị mma isi mechie ọchụchọ ahụ bụ pịnye aha ụlọ ọrụ ụgbọelu n'ime ogwe nchọta igbe mbata gị, wee kpochapụ ya ebe ahụ. Ozi ịntanetị ga -agụnyekarị “kredit njem” ma ọ bụ “ndoputa” n'ahịrị isiokwu.
Jiri ụgbọ elu mepụta profaịlụ
Ozugbo ịchọtara email gị, ekwesịrị inwe ntuziaka maka otu esi abanye na webụsaịtị ụgbọ elu wee jiri kredit njem gị degharịa. Site n'ebe ahụ, ị ​​ga -enwekwa ike lelee kredit ole ị nwere yana mgbe ọ ga -agwụ.
Kpọọ ndị ọrụ ndị ọrụ ụgbọ elu
Nhọrọ a nwere ike ịchọ otu awa ma ọ bụ abụọ na ekwentị. Ọ bụrụ na ejighị n'aka ma ị nwere kredit ma ọ bụ na ọ nweghị, ọ ga -akacha mma ka gị na onye nnọchi anya ndị ahịa ụgbọ elu gị kwurịta okwu. Site na aha gị na nọmba nkwenye izizi, ị ga -enwe ike iji kredit ahụ ị hapụrụ.
Ozugbo kredit njem gị gwụsịrị, enweghị ike iweghachite ya. Ọ bụrụ na ị kagburu ma ọ bụ gbanwee ụgbọ elu ọ bụla n'ime afọ abụọ gara aga, jide n'aka na ị ga -azụta ọnụ ahịa tiketi gị ejibeghi tupu oge agafee.
Rute ugbu a, United Airlines bụ naanị ụgbọ elu US nke gbatịrị ọnụ ahịa tiketi a na -ejighị na Dec 31, 2022.